जुलुसको नेतृत्व गर्दै पृथ्वीनाराण शाह! | karnalikhabar.com
जुलुसको नेतृत्व गर्दै पृथ्वीनाराण शाह! – karnalikhabar.com
जुलुसको नेतृत्व गर्दै पृथ्वीनाराण शाह!
प्रकाशित मिति :2017-01-12 07:34:38 पृथ्वीजयन्ती मनाउन गोरखा सदरमुकाममा स्थानीय भेला भइरहेका थिए। दौरा–सुरुवाल र श्रीपेच लगाएका ‘पृथ्वीनारायण शाह’ त्यहीँ आइपुगे। उनको हातमा तरबार र ढाल थियो। कम्मरमा पटुकी बाँधेर खुकुरी भिरेका। र्‍यालीका सहभागी उनैलाई हेर्न थाले। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ। गोरखा नगरपालिका–१ पँदेलीका ओमबहादुर श्रेष्ठ पृथ्वीजयन्ती मनाउन पृथ्वीनारायण शाहकै भेषमा आएका थिए। उनी र्‍यालीका आकर्षक बने। बाजागाजा अगाडि लगाएर, दायाँ हात उठाएर हिँड्दा उनी पृथ्वीनारायण शाहजस्तै देखिएका थिए। नक्कली पृथ्वीनारायण बनेका श्रेष्ठसँग तस्बिर खिचाउनेको भीड लाग्यो।
र्‍यालीमा उनीसँग तस्बिर खिच्न समय माग्नेलाई उनी ठट्यौली पारामा उत्तर दिन्थे, ‘पृथ्वीनारायण शाह मेरो बाजे हुन्।’ पृथ्वीनारायणको जस्तै पोसाक बनाउन पाँच हजार लागेको श्रेष्ठले बताए। ‘काठको तरबार बनाएको छु, नाङ्लोलाई रङरोगन गरेर ढाल बनाएको छु,’ उनले भने, ‘सीप जानेको मान्छे, बाबियो र बिजुलीको बल्बले श्रीपेचको भवर बनाएको हुँ, श्रीपेचलाई रङ लगाएपछि उस्तै देखिएको छ।’ उनी पहिलोपटक यही वर्ष भएको नवौँ गोरखा महोत्सवमा पृथ्वीनारायणको भेषमा देखिएका थिए। त्यतिवेला धेरैले मन पराएपछि पृथ्वीजयन्तीमा पनि त्यही पहिरन लगाएको उनको भनाइ छ।
‘अब सार्वजनिक कार्यक्रममा यही पहिरन लाउँछु,’ उनले भने। युवा पुस्ताले शाहलाई नभुलून् भनेर आफू शाहको भेषमा आएको उनले बताए। पृथ्वीनारायणको योगदानलाई ओझेलमा पार्ने गरी प्रचार हुन थालेको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे। बजार परिक्रमा गरेर र्‍यालीका सहभागीले पृथ्वीनारायण शाहको सालिकमा माल्यार्पण गरेका थिए।
पृथ्वीनाराण शाहको जन्मस्थल गोरखामा उनको २९५औँ पृथ्वीजयन्ती जनस्तरबाटै विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। सरकारले कुनै औपचारिक कार्यक्रम नगरेपछि जनस्तरबाटै मनाइएको हो। नेपाल एकीकरण गर्ने शाहको सम्झनामा सरकारले पृथ्वीजयन्ती मनाउन कुनै चासो नदिएको भन्दै कार्यक्रमका सहभागीले आक्रोश पोखेका थिए। उता राप्रपाको आयोजनामा बुधबार सदरमुकामको हरमटारीबाट बाजागाजासहित र्‍याली निक्लिएको थियो।
र्‍याली गोरखा संग्रहालयस्थित पृथ्वीनारायण शाहको सालिक पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। सरकारले पृथ्वीजयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिन कन्जुस्याइँ गरेको भन्दै कार्यक्रमका सहभागीहरूले चिन्ता जनाए। ‘पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्रपिता हुन्, राष्ट्रपिताको सम्मानमा बिदा नदिनु नेपालीकै अपमान हो,’ गोरखा क्याम्पसका प्रध्यापक यदु अधिकारीले भने। राष्ट्रिय एकता, रक्षा र देशलाई अखण्ड राख्न राष्ट्रिय रूपमै एकता दिवस मनाउन राप्रपा जिल्ला अध्यक्ष भगवान मल्लले माग गरे।
०६४ मा तत्कालीन माओवादीले पृथ्वीनारायण शाहको सालिक तोडेपछि स्थानीयको सक्रियतामा पुनः सालिक निर्माण गरिएको छ। त्यसयता गोरखामा जनस्तरबाटै पृथ्वीजयन्ती मनाउन थालिएको हो। ‘इतिहासलाई भुल्न हुँदैन, इतिहास बिर्सिएर हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई अपमानित गर्न हुन्न,’ गोरखा संग्रहालयकी प्रमुख करुणा राईले भनिन्, ‘२९५औँ वर्षमा पनि शाहको उपदेशहरू सान्दर्भिक छ।’ पृथ्वीनारायण शाहको जन्मस्थान गोरखामा बुधबार पृथ्वीजयन्ती भव्य रूपमा मनाइयो। गोरखाबजारमा भेला भएका स्थानीय बासिन्दा समारोहस्थलतर्फ गइरहेका थिए, दौरा–सुरुवाल र श्रीपेच लगाएर पृथ्वीनारायण शाहकै पहिरनमा एक स्थानीय बीचमा टुप्लुक्क आइपुगे जसको हातमा तरबार र ढाल थियो। कम्मरमा पटुकी बाँधेर खुकुरी भिरेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहकै शैलीमा दायाँ हात उचाालेर चोर औँलो ठड्याएपछि त र्‍यालीका सहभागीहरूको ध्यान उनैतर्फ मात्रै सोझियो।